G/W/S/001/04 London, 19/01/2004
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ka digayaa weli xadgudubyada sii soconaya ee lagu hayo heshiiskii ay madaxda Soomaalidu gaareen ee " Declation on Cessation of Hostilities 27 October 2002", Eldoret, Kenya.
Waxaa wax lala yaabo ah, dareenka qof kastaana diidayaa colaadaha joogtada noqday ee ka socda dalkeena Soomaaliya, iyadoo ujeedada loo dagaalamayana aan la gareneyn, waxa ay ku gaarayaan qeybaha uu dagaalku ka dhexeeyo.
Sidaas darteed, Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa qeybaha uu dagaalku ka dhaxeeyo kuna dagaalamaya duleedka magaalada Baladweyn ee dalka Soomaaliya in ay u joojiyaan shuruud la'aan dagaalada, khilaafka jirana lagu dhameeyo wadahadal nabadeed.
Ugu dambeyntii waxaan tacsi u direynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoysaskii iyo ehelladii ay ka geeriyoodeen xubnihii ka tirsanaa ee ay colaadahaasi galaafteen iyo dhibaatooyinka guud ahaan ka soconaya dalka Soomaaliya.
Faafin: SomaliTalk.com |Jan 20, 2004
Baaq nabadeed oo ka yimid beesha Sool,Sanaag & Hawd ee Galbeedka Austaralia
Ku DHAMAAN ISIMADA DEEGAANKA
KU CUQAASHA/ CULIMAAUDINKA IYO DHAMAAN WAXGARADKA BEESHA
Kadib markii uu na soo gaadhay dhacdooyin kii dhowaanahan ka dhacay deegaanka taasoo nagelisey walaac xoogleh.waxaa jaaliyada galbeedka australia ee beesha sool sanaag iyo hawd waxay isugu yimaadeen shir laxidiidha arintaas waxay na soo saareen qodobadan.
1) waxaanu si weyn udhiiri gelinaynaan waxgaradka beesha oo ay hogaaminayaan isimadu in ay uguntadaan in si shuruud la,aan ah loo joojiyo dhiig danbe oo ka dhex daata dadka ehelka ah.
iyo weliba derisyada wadadegan.
2) in khilaafaad ka jira oodhan loo hawl galo in si nabad iyo wada xaajood lagu xaliyo cidkasta oo hawshaa ku luglehna lala xidhiidho.
3) waxaanu taageersanahay in la ix tiraamo cid walibana u hoggaansanto rabitaanka dadka in tiisa badan ama dhanka ay dadwenuhu rabaan.
KA; Jaaliyada Beesha sool / sanaag iyo Hawd ee galbeedka Australia.
kala xiriir: Assad Hassan Saadle saadle5@hotmail.com